Alakamisy 28 Novambra 2019. – FJKM
Alakamisy 28 Novambra 2019.
Teny hentitra tsy misy vazivazy ireto:
1-Indro …hahatonga loza fa tsy soa (44.27)
Miantefa amin’ireo mafy sofina sy tia mifamaly amin’ Andriamanitra izany. Tsy misy fiadanana ho an’ny ratsy fanahy , fa fandringanana no anjarany . Ho an’ny mankato kosa dia hoy i Jehovah : »Izaho, mahalala ny hevitra iheverako anareo, dia hevitra hahatonga fiadanana fa tsy loza » (Jer 29.11).
2-Izay ho to teny na ho Izaho na ho izy(44.28)
Mampalahelo ity fahasaham-poana ananan’ireto mponina ireto izay sahy mifaninana amin’ Andriamanitra . Tsy fantany ve fa rehefa miteny Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka izany , na soa ambarany na ratsy? Diniho ny Isa 55.11.
3-Hataoko velona aina ianao (45.5 DIEM):
Teny natao ho an’i Baroka , mpitantsoratr’i Jeremia izany . Nalahelo izy satria dia filazana loza hatrany no asaina soratany . Nanome toky azy kosa i Jehovah fa hamelona azy , na aiza mbola hanaovany ny asa fanompoana . Toky ho antsika ihany , fa hoy i Jesoa : »Fiadanana no avelako ho anareo …Aza malahelo na matahotra ny fonareo » (Jao 14.27).